बलदेव र घनश्यामले सकेनन्, पद्माले के गर्लिन ? NewsButwaltoday
तीन दशक पुरानो बाँकेस्थित कपास विकास समितिलाई पुर्नजिवन दिने आशा गरिएको एउटा सरकारी योजना लागू नै नभई तुहिएको छ । तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको कार्यकालमा समितिलाई पुर्नजिवन दिने गरी योजना बनेको थियो । उक्त कार्ययोजना उनकै कार्यकालमा त कार्यान्वयन भएन भएन । त्यसपछि आएका दुई जना मन्त्री घनश्याम भुषाल र पद्मा अर्यालले समेत कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन् । भुषाल मन्त्रीबाट हटिसकेका छन् भने पद्मा अर्यालले योजना कार्यान्वयनमा कस्तो रणनीति बनाउँछिन् भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
उक्त कार्यदलले २०७६ पुस ७ गते तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको जोशीले जानकारी दिए । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका जोशीले भने,–‘यो प्रतिबेदन कार्यान्वयन भएपछि कपास विकास समितिले नयाँ जीवन पाउँछ । मन्त्री ज्यू अत्यन्त सकारात्मक भएको पाएका थियौं तर कार्यान्वयन भएन ।’ प्रतिवेदनमा कपास विकास समितिलाई राष्ट्रियस्तरमा बिस्तार गर्दै बजार प्रर्बधन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव समेटिएको छ । हेटौडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । ‘कपास विकासको मुख्य बजार रहेको हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सन्चालन गर्नु’ जरुरी रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बजार व्यवस्थापनको क्षमता बिस्तार गर्दै डिलर मार्फत कपास बिक्री गर्ने योजना बनाउन सुझाव दिईएको जोशीले बताए । उनले भने,‘बजार प्रर्बधनलाई आक्रमकरुपमा लैजाने भनेको हो ।’
कृषकलाई सहुलित दिएर कपास उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नेदेखि भारतबाट भित्रिने कम गुणस्तरको कपासलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिईएको छ । अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न र सोही जग्गामा कपास उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने सुझाव दिईएको जोशीले बताए । दुई वर्षदेखि निमित्तका भरमा चलेको कपास विकास समितिले चांडै कार्यकारी प्रमुख पाउन आशा थियो तर मन्त्री आए गए ! प्रतिवेदन कार्यालयमा ध्यान दिइएको छैन ।
कपासल विकास समितिको ओरालो यात्रा स्थापनाकालमा दुई हजार मेट्रिक टनसम्म कपास बिक्री गरेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ८० मेट्रिक टन कपास बेच्ने लक्ष्य तोकेको छ । त्यही परिणामको कपास पनि बिक्री नहुने जोखिम देखेपछि समितिले आफ्नो कार्यालय, खजुरा बाँकेको परिसरबाटै फुटकर बेच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कपास विकास समितिले २०४८देखि ५१ सम्म २ हजार टन कपास बिक्री गथ्र्यो । २०५२ मा जब माओवादी बिद्रोह सुरु भयो त्यही वर्ष पनि एक हजार सात सय २३ टन बिक्री गरेको थियो । २०५९ मा चार सय टनसम्म कपास उत्पादन गरेको थियो । गत वर्ष २०७०/७१ देखिको दुई सय १२ टनमध्ये हाल ५२ टन कपास बिक्री भए पनि तीन करोड ४८ लाख मूल्यबराबरको एक सय ६० टन कपास मौज्दात छ । ‘बीचमा एक वर्ष कपास बिक्री भएन । त्यसको मौजद हरेक वर्ष थोरै थोरै बिक्री गरिरहेका छौं ।’– जोशीले भने । समितिसँग मेसिनरी उपकरण पर्याप्त भएपनि कपासको अभावमा पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ।
माओवादीको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८/५९ देखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । राष्ट्रियस्तरमा कपासखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारवर्दिया गाउँपालिका अन्तरगतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले २०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपूर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीवाली लगाउँदै आएका छन् ।
‘कपास उत्पादनका लागि उपलब्ध गराइएको उक्त जग्गामा कपासखेती हुन्न’, जोशीले भने । जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीय बासिन्दाले २०६० सम्म जग्गा प्रयोग गरेबापत सरकारलाई राजस्व बुझाए पनि त्यसयता सरकारले राजस्व पाएको छैन । आठ सय २५ बिघामध्ये सरकार आफैले पाँच पाँच कट्ठाका दरले पाँच सय ५५ मुक्त कमैया परिवारलाई एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा प्रदान गरेको थियो । समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ । यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्क आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुल्सिपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ।
अपडेट : 2021-01-31 14:00:58